သက်ဝေ: အဖြူရောင် အိပ်မက်
Hmoo December 11, 2009 at 2:53 PM
Congratulation to Nobel peace prize winner & white greeting card post owner :)
Nge Naing December 11, 2009 at 5:05 PM
ကျွန်မလည်း အဖြူရောင်ဆို သိပ်ကြိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ ညစ်ပေလွယ်လို့ သိပ်မ၀ယ်ဝတ်ဖြစ်ဘူး။ အိပ်မက်ကလန့်နိုးပြီး အပြင်မှာ စကားပြောတာ ဖြစ်ဖူးတယ်။ စာအရေးအသားက သိပ်ကောင်းတာပဲနော့် အဲဒီလိုတကယ် ရေးတတ်ချင်တယ်။
မေဇင် December 11, 2009 at 5:21 PM
မမ ... နောင့် လဲ အဖြူရောင်ကြိုက်တယ်...အမေ ကလဲ ..ငယ်ငယ်လေး ထဲက အဖြူလေးတွေပဲ ဆင်ပေးတယ်..။း) ဒါကြောင့် ငယ်ငယ်တုန်း က အမေ ဆင်ပေးတဲ့ အဖြူလေးတွေပဲ ၀တ်ခဲ့တယ်...။ ခုကြီးလာတော့... အဖြူရောင်က ပေလွယ်တယ်ဆိုပြီး...တစ်ခြားအရောင်တွေ ပြောင်းဝတ် တတ်ခဲ့တယ်...။ :/
ချစ်ကြည်အေး December 11, 2009 at 7:36 PM
ကိုငှက်ရဲ့ သီချင်းလေးကို လွမ်းသွားတယ်၊
" အင်္ကျီ ဖြူ ဖြူ လေးရယ် မင်းလောက် တို့ မသန့်စင်တယ် .....လိပ်ပြာ မလုံချင်ဘူးကွယ်...အဖြူရောင်မြင်ရင် ...ရင်မှာနာကျင်ခဲ့......"
ဝေလင်း December 11, 2009 at 8:30 PM
ကျွန်တော်လည်း အနက်ရောင်နဲ့ အရောင်မှိုင်းမှိုင်းကိုပဲကြိုက်တယ်
Moe Cho Thinn December 12, 2009 at 1:17 AM
အက်ဆေးလေး ကောင်းတယ်။ နိမိတ်ပုံနဲ့များ ရေးထားသလား ထင်မိတယ်။
ချိုသင်းလဲ အဖြူရောင်ကို ချစ်တယ်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း December 12, 2009 at 11:42 AM
ဖတ်ကောင်းတဲ့ အက်ဆေး လေးတွေ လက်စလက်န ရှိရဲ့သားနဲ့ ..
Bino December 12, 2009 at 1:40 PM
I like to say broadly,
Under 18 years old boys and girls are innocent.
Their icon is white.
We can dye them as we wish.
As you know, most of academic schools had chosen the young generation (under 18 years old boy)
You can find the middle Burma Wya Thit Kyi,
Pyin Oo Lwin and Institute of Marine Technology in Yangon.
They are cadet of Myanmar Naingan.
They had been dyed the colour by Government's policy.
The students who passed any university can't be dye.
Once takeadye any colour (idealism) to young boy or girl,
It remain unchanged.
I'maman who dyed by my social environment.
သိင်္ဂါကျော် December 13, 2009 at 12:47 AM
တို့ကတော့ အဖြူရောင် ဆိုရင် ယူနီဖောင်း အင်္ကျီတွေရဲ့ အရောင်လို့ပဲ မြင်နေတယ်...
PAUK December 13, 2009 at 10:07 AM
khin oo may December 13, 2009 at 1:11 PM
တို့ရှာတာတွေ့တယ်။ ဝတ်ကြည့်လိုက်တော့အကျီက လှပြီးလူက ဝနေတာနဲ့ထားခဲ့ရတယ။်
nu-san December 13, 2009 at 4:58 PM
အမက စာရေးကောင်းတော့ ဒီပို့စ်လေးကို ၂ ခါ တောင် ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်... အဖြူရောင် ကိုကြိုက်ပေမယ့် တကယ်တမ်းဆိုရင် အရောင်အရင့်တွေပဲ ၀တ်ဖြစ်တာ များတယ်.. :)